नेहाको लास माथि इजरायलमा बस्ने केहि नेपालीले गरे यस्तो घृणित राजनीति, लास नेपाल होइन इन्डिया पठाउनुपर्छ भन्दै गरे वकालत – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेहाको लास माथि इजरायलमा बस्ने केहि नेपालीले गरे यस्तो घृणित राजनीति, लास नेपाल होइन इन्डिया पठाउनुपर्छ भन्दै गरे वकालत
अन्सु थापा, इजरायल – बिराटनगरकी नेहा शर्मा परिवारका लागि खुसी खोज्दै इजरायल पुगीन् । आफ्नो सुन्दर संसार बसाउने सपना लिएर इजरायल गएकी नेहाको त्यो सपना पुरा नहुँदै यो संसार छोडिन् । श्वास प्रस्वास सम्बन्धि रोगको कारण उनको इजरायलमै मृत्यु भयो । अनि सुरु भयो उनको लास माथिको राजनीति । हामी अधिकांश नेपालीको लागि वैदेशिक रोजगारी रहर होइन बाध्यता हो ।
सुन्दर संसार बनाउन नेपालमै बसेर मात्र सम्भव नभएपछि भोली राम्रो बनाउँन आज खराव बनाउँदै आफन्त छोडेर बिदेसिन्छौं । सोही क्रममा नेहा पनि अनेकन बाधा र अप्ठ्यारा पार गरेर इजरायल पुगिन् । तर त्यहाँ उनलाई स्वास्थ्यले साथ दिएन । केही वर्ष देखिको स्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगले अन्तत उनले सदाका लागि आँखा चिम्लिन् ।
उनी जिउँदो हुंदा उनको अप्ठेरोमा सहयोगी बन्न नगएका इजरायलमा बस्ने नेपाली उनको मृत्यु पछि भने लासमा राजनीति गर्न आइपुगे । नेहाको जिवन संघर्षको कथा हो । परिवारका लागि खुसी खोज्न भन्दै इजरायल पुग्नु अघि पनि उनले निकै संघर्ष गरिन् । उनले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो राष्ट्रियतालाई थाँती राखेर इजरायल पुगेकी थिइन् । त्यतीबेला उनको मन कति रोएको थियो होला । तर त्यो भन्दा पनि बढी रोयो होला जब आफ्नै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी नै उनको मरेको लासलाई नेपाल होइन भारत पठाउनुपर्छ भन्दै राजनीति गरे ।
त्यहाँ पुग्न जुन बाटो जुन तरिका अपनाएको भएपनि उनी नेपालकी छोरी थिइन् । विराटनगरमा उनका परिवारले उनको मृत शरिर कुरेर बसेका थिए तर इजरायलमा भने उनको लास माथि राजनीति हुँदै थियो । बुवा पुष्कर राज थापा र संगै जन्मेकी अर्की दिदी र उनका दुई छोराछोरीले खुसी लुटिएको उनको लास कुरेर बसेका थिए । तर भारतको बाटो हुँदै आएकी नेहालाई नेपाल होइन भारत पठाउनुपर्छ भन्दै राजनीति गर्ने नेपाली दाजुभाईले बिर्से होलान् उनका पनि दिदी बहिनीले आफ्नो खुसीका लागि कतै यस्तै संघर्ष त गरेका छैनन् ?
हामी देख्छौं नेपालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले विदेशमा भएका नेपालीहरु बढी तरंगित हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा एक आपसमा बाँडीएर एक अर्काका दुस्मन बनेका हुन्छन् । त्यसको बल्दो उदाहरण बनिन् नेहा ।
नेहाको पार्थिव शरिर नेपाल पठाउन इजरायलमा पनि केही ब्यक्तिले निकै संघर्ष गर्नुपर्यो । अन्तत निकै संकट र कष्टका साथ नेहाको शव नेपाल ल्याएर अन्तिम संस्कार पुरा गरिएको छ । तर अहिले पनि इजरायलमा बस्ने नेपालीहरुबिचमा भने यो मुद्या सेलाएको छैन । त्यहाँ बस्ने नेपालीहरुको फेसवुक वालमा एक अर्कालाई छेडखानी गरेर लेखिएका स्टाटस अझै देख्न सकिन्छ ।
नेहाको जिवनको पछिल्लो समयमा साथ दिन र अस्पताल पुर्याउने उनका साथी पनि निकै पीडित छन् । उनलाई अस्पताल पुर्याउने र औषधि उपचार गर्ने तथा मृत्यु पछि शव नेपाल पठाउन पहल गरेकै कारण नेपालीहरुले नै चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको भन्दै साथी मदन सिवाकोटीले लामो स्पष्टिकरण सहितको स्टाटस लेखेका छन् ।
नेहाले आफु जिवित छंदै परिवारको सल्लाहमा आफ्नो अंग दान गरेकी थिइन् । सो कुरालाई लिएर पनि उनका साथीलाई अनेक लाञ्छना लगाएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै साथी मदनले वास्तविकता प्रष्ट पारेका छन् । उनले नेहोको अंग दानको निर्णयमा उनको परिवारको समर्थन र साथ रहेको बताएका छन् ।
उनको स्टाटस यस्तो छ । ‘बिगत केही समय अघिदेखि नेहाको डेडबडि नेपाल डेलिभरी गर्ने प्रक्रियालाई लिएर अझै पनि केही फेसबुक प्रयोग कर्ताहरुबाट मेरो चरित्र हत्या गर्ने कोसिस भइ रहेको मैले महसुस गरेको छु । तत् सम्बन्धमा मैले बाराम्बार सत्यतथ्य बताउदै आएको छु । अब उप्रान्त यससम्बन्धमा फेरि पनि अर्गनल प्रचार गरियो भने म कानुनी उपचारको खोजी गर्ने छु ।
नेहालाइ मैले केही बर्सदेखी नजिकबाट चिनेको छु, बुझेको छु, हामी एक अर्काको नजिक थियौँ । सुख दुखको साथी थियौँ । मलाई केही पर्दा नेहालाइ भन्ने गर्थे । उसले पनि हरकुराहरु म संग सेयर गर्ने गर्थी । हामी बिच आत्मीय मित्रताको सम्बन्ध थियो ।
उनी बिरामी भएको दिन काम विशेषले उनिसंगै थिए । तर अचानक उनि ढल्न पुगिन । मैले हतार हतार मा उनलाइ नजिकको अस्पतालमा लगेर एड्मिट गराए । प्रेसरको कारण नेहा बेहोस भएको डाक्टरले मलाई बताए । डाक्टरहरुको टिमले अनेक प्राबिधिक उपकरणको प्रयोग गरेर उनलाइ होसमा ल्याउने प्रयास गरे तर दुर्भाग्य बस डाक्टरहरुको प्रयास सफल भएन । सदाकोलागि नेहा बेहोस् भइन् ।
मैले नेहाको अबस्थाको बारेमा उसको परिवारलाइ खबर गरे । परिवार र अस्पताल प्रसासन बिच सम्पर्क गराए । अस्पतालले नेहाको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च निसुल्क गरिदिने र डेडबडि पनि निसुल्क नेपाल डेलिभरी गरिदिने त्यसबापत नेहाको भित्री अंङ्ग मृगौला अस्पताललाई डोनेट गरिदिने अस्पताल प्रसासन र परिवारबिच सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार नेहाको मृत शरीर हिजो नेपाल पुगेको छ ।
सत्यतथ्य यो नै हो । म संग सबै कुराको प्रमाण छ । तर गलत सोच भएका,मानबिय भावना नभएका केही फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले अनेक झुटा प्रचारप्रसार गरेर मैले नेहाको अंङ्ग बेचेको आरोप लगाए । यस्तो संबेदनसिल बिसयमा झुट्टा आरोप लगाएर मेरो मान मर्दन गर्नेहरुलाइ म माथी लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु ।
नेहाको आमाले मलाई भन्नू भएको थियो अङ्ग दान जीवन दान हो नेहाको अङ्गबाट अरु कसैले नयाँ जीवन पाउछ भने अंङ्ग दान गर्नु पर्छ । हिन्दु धर्ममा अङ्गदानलाइ पुण्यको काम भनेर भनिएको छ । नेहाको ममिको महान बिचारको प्रभाव मलाई गहिरो रुपमा परेको छ ।
अर्को कुरा, हो नेहा इन्डियन पासपोर्ट होल्डर नै हुन् । इन्डियन पासपोर्ट मार्फत नेहा इजरायल आएकी थिइ । तर उनी हुन त नेपाली नै हुन नि । घर नेपाल हो आमा बुबा नेपाली । यो सत्य जान्दा जान्दै केही ब्यत्तिहरु जसमा मानबिय भावना रत्तिभर छैन तिनीहरुले नेहा इन्डियन हुन्ने । हाको डेड बडि ईन्डिया डेलिभरी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाए । अस्पताल प्रसासनलाइ नेहाको शरीर नेपाल पठाए अदालतमा मुद्दा हाल्ने धम्कि दिए । अब बिचार गर्नुहोस् त एक पल्ट बिदेशमा छोरिको मृत्युको कारण सोकको आहलमा डुबेको नेहाको परिवारमा कस्तो बज्रपात पर्यो होला । आफ्नै छोरिको लाससम्म हेर्न नपाउने ? नेहाको मृत सरिरमाथि कोठे राजनीति गर्नेहरुमा अलिकति लोकलाज छैन ? ती लोकलाज नभएका, मानबिय भावना रत्तिभर नभएकाहरुले नेहाको नक्कली आमाबुबा पनि खडा गरेका थिए । हेर्नुस् यिनिहरुको दानबिय चरित्र । तर नेहाको सरिरमाथि अपराधीहरुले जे जति राजनीति गर्न खोजे पनि सकेनन्जि । त सधै सत्यको नै हुन्छ ।’
भर्खरै पोखराबाट आयो दु:खद घटना को खबर, गोली चलेपछि ८ पक्राउ
रिहाइ भएका छविलाल बाहिर अाएपछि यस्तो भन्दै हिड्न थाले…